स्ट्याम्पिंग पार्ट्स निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन स्ट्याम्पिंग पार्ट्स फैक्ट्री
स्ट्याम्पिंग पार्ट्स को आवेदन १. इलेक्ट्रिकल पार्ट्स स्ट्याम्पिंग प्लान्ट। यस प्रकारको कारखाना एक नयाँ उद्योग हो, जुन विद्युतीय उपकरणहरूको विकासको साथ विकसित हुन्छ। यी कारखानाहरू मुख्यतया दक्षिणमा केन्द्रित छन्। २. अटोमोबाईल र अन्य उद्योगका भागहरू स्ट्याम्पि।। यो मुख्यतया मुक्का र कपाल कपालबाट गठन हुन्छ। यि धेरै उद्यमहरू स्ट्यान्डर्ड पार्ट्स कारखाना र केही स्वतन्त्र मुद्रांकन प्लान्टका हुन्। वर्तमानमा त्यहाँ केहि साना कारखानाहरू छन् अटोमोबाइल फैक्टरि वरपर ...
स्ट्याम्पिंग पार्ट्स 7
स्ट्याम्पिंग पार्ट्स १०
स्ट्याम्पिंग पार्ट्स 9
स्ट्याम्पिंग पार्ट्स ११